PressReader - Isolezwe: 2018-05-17 - Kuboshwe onogada ebhilidini okwafa isitshudeni
Kuboshwe onogada ebhilidini okwafa isitshudeni
Isolezwe - 2018-05-17 - IZINDABA - KWANDOKUHLE NJOLI
KUBOSHWE onogada ababili abaneminyaka engu 30 no 32, abangenayo imvume yokusebenza njengonogada abaqashwe ebhilidini okuhlala kulo izitshudeni zaseMangosuthu University of Technology (MUT) eLonsdale eThekwini, bayophoswa imibuzo.
Onogada bayiswe emaphoyiseni kugasela inhlangano elawula ukusebenza konogada kulelli, iPrivate Security Industry Regulatory Authority (PSIRA). AbakwaPsira bagasela nje emasontweni amathathu adlule kubulawe isitshudeni, uZolile Khumalo (21) kuleli bhilidi, okuthiwa wadutshulwa ngowayeyisoka lakhe uMnuz Thabani Mzobe (23), ozobuyela namuhla enkantolo ngaleli cala.
Okhulumela iPsira, uNksz Talent Zwane uthe inkampani (angeke akwazi ukuyidalula okwamanje) ebiqashwe ngabebhilidi okuhlala kulo izitshudeni, eliqashwe yiMUT, ibhalisiwe ngokusemthethweni kodwa onogada ababaqashile abanazo izincwadi ezisemthethweni zokwenza lo msebenzi.
“Besihlola zonke izikhungo ezihlala abafundi ngemuva kwesehlo sokubulawa ngokudubula komfundi obehlala kwesinye sezikhungo ezihlala izitshudeni, sibheka ukuthi yini eyadala ukuthi umsolwa akwazi ukungena kulesi sikhungo ephethe isibhamu. Siyasola ukuthi esinye sezizathu zalokhu wukuthi kuqashwa onogada abangenazo izincwadi ezisemthethweni zokuba onogada.”
UNksz Zwane uthe abanye onogada ababili bakwazile ukubaleka, kwaboshwa ababili abagcinwe esiteshini samaphoyisa ePhoyinti.
Uthe umnikazi webhilidi bamuthintile wathi useGoli ngeke akwazi ukuphawula ngalolu daba. UNksz Zwane uthe bavulele umphathi webhilidi icala lokuphula umthetho wokuziphatha.
Okhulumela amaphoyisa uColonel Thembeka Mbele uthe onogada bathathiwe ukuze baphoswe imibuzo ngokuphula umthetho wesigaba 20, wakwaPsira.